मामुबाबाले भोट कस्ताे मान्छेलाई हाल्नुहुन्छ ?
शिलापत्रमा मलाई बालपत्र धेरै मन पर्छ । मैले अहिलेसम्म चार जनाको बालपत्र पढेँ । म ढिलो पढ्छु भनेर मेरो मामुले मलाई बालपत्र पढेर सुनाउनुहुन्छ । मलाई अगाडि आउने फोटो र क्याप्सन मन पर्छ र त्यही पढ्छु । त्यसैले त्यो पढ्छु, अनि मामुले पढेर सुनाएको सुन्छु ।
मलाई पनि धेरैले पढ्नुहुन्छ नै होला । मलाई खास लेख्न त आउँदैन । म यो लेखेर मामुलाई देखाउनेछु । मामुले केही सच्याएरै इमेल गरिदिनुहुन्छ होला ।
तीन/चार महिना त हामी कोठामै बस्यौँ । त्योबीचमा एकचोटि म मेरो मामाघर दाङ गएँ । तर, सबै घरभित्रै थुनिनुपरेकाले खासै रमाइलो भएन । त्यसपछि पनि खासै रमाइलो भएन । हिजो १७ पुसमा मेरो जन्मदिन थियो । बरु त्यहाँ निकै रमाइलो भयो । मेरा सबै आफन्त आउनुभयो । मलाई विस गर्नुभयो । गालामा माया गर्नुभयो । दसैँमा भन्दा रमाइलो भयो ।
घरमा आउने पाहुनाले मलाई ‘स्कुल लागेको छैन’ भनेर सोध्नुहुन्छ । अस्ति भर्खर स्कुल सुरु भएको छ । तर, मैले सर र मिसको नाम नै बिर्सिसकेँ । ९/१० महिना स्कुल नगएपछि कसरी सम्झिनु ! अनलाइन कक्षबाट खासै नसिकिने रहेछ ।
मलाई पढ्नु छ । ठूलो मान्छे बन्नु छ । बुलेट बाइक किन्नु छ । बाबा र मामुलाई खुसी पार्नु छ ।
मामुले भन्नुहुन्छ, यसका लागि धेरै पढ्नुपर्छ रे ! तर, कोरोनाले यत्रो महिना खेर फालिदियो । अब भने ध्यान दिएर पढ्नु छ । स्कुल पनि जान थालेको छु । धेरैपछि साथीहरूसँग भेट्दा कस्तोकस्तो लागिरहेको छ । सर/मेडमसँग म मज्जाले बोल्न थालेको थिएँ । आजकल अलि लाज लाग्छ । तर, मामुले मलाई सम्झाउनुहुन्छ- मनका जिज्ञासा मेटाइहाल्नुपर्छ । अब सोधौँला ।
मैले एउटा बालपत्र पढेको थिएँ । कहाँको साथीले लेख्नुभएको थियो, उहाँको र ठाउँको नाम मैले ठ्याक्कै सम्झिन सकिनँ । त्यो पढेर गाउँतिरका मजस्तै साथीहरूले धेरै दुःख गर्दारहेछन् भन्ने थाहा भयो । मैले युट्युब हेरेर थाहा पाएँ, परपरका देशमा त हामीजस्ता केटाकेटीलाई हामीले भोट हालेको मान्छेले पढाइदिँदो रहेछ । केटाकेटीले काम नै गर्नुपर्दैन रहेछ । तर, हाम्रोमा त १० वर्षको दाइले पनि काम गरेर पढ्नु पर्दोरहेछ, क्लास छोडेर माछा मार्न जानुहुँदो रहेछ ।
बालपत्रः दसैँ आयो, गाउँ जाऊँला !
हाम्रो मामु र बाबा पनि भोट हाल्न त जानुहुन्छ । तर, त्यो अरु देशको जस्तै मान्छेलाई हाल्नुहुन्छ कि हुन्न, मलाई थाहा छैन । मैले सोधेँ भने मामु हाँस्नु मात्र हुन्छ, उत्तर दिनुहुन्न । बरु उल्टै भन्नुहुन्छ, ‘तिमीले पढ्ने हो, यस्ता कुरामा ध्यान दिने होइन ।’
मलाई त उत्तर चाहिएको छ । मेरो मामु र बाबाले भोट त हाल्नुहुन्छ तर मलाई त्यसले के फाइदा गरेको छ त ?
म सानो छु । मेरो प्रश्न पनि सानो नै होला । त्यो साथीले लेखेको थियो, ‘शहरका केटाकेटी त टीभीमै मस्त हुन्छन् ।’ म पनि कहिलेकाहीँ टीभीमा मस्त हुन्छु । मोबाइल गेम खेल्छु । तैपनि, पढ्नका लागि काम गर्नु नपर्ने भए त त्यतै मज्जा छ । म पढ्छु पनि । झोलाभरि किताब बोक्नुपर्छ । रट्नुपर्छ । कडा अनुशासनमा बस्नुपर्छ । टाइ लगाउन मन नलागे पनि लगाउनुपर्छ । स्कुलमा टाउको दुख्दा पनि बस्नैपर्छ, पढ्नैपर्छ । मामुले भन्नुभएको– जसले पहिला दुःख गर्छ, उसले पछि सुख पाउँछ । त्यसैले साथीहरू सुखदुःख पढौँ । पढियो भने .सुख पाइन्छ रे नत्र दुःख ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस १८, २०७७, ०७:२०:००
निर्मल पुर्जाले भने : हिउँदमा केटु आरोहण असम्भव जस्तै थियो, स-साना सहयोगले हौसला मिल्यो निर्मल पुर्जाले भने : हिउँदमा केटु आरोहण असम्भव जस्तै थियो, स-साना सहयोगले हौसला मिल्यो3min read
जनमुक्ति सेनालाई प्रचण्डको बेवास्ता, ओलीको वाचा त्यसैले हामी उता लाग्यौँ : लीलबहादुर थापा जनमुक्ति सेनालाई प्रचण्डको बेवास्ता, ओलीको वाचा त्यसैले हामी उता लाग्यौँ : लीलबहादुर थापा5min read
उत्तेजना र रिसले कसैलाई फाइदा गर्दैन : मन्त्री ज्ञवाली 1 min read
प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : एपीएफ क्लब सेमिफाइनलमा2min read
फाइजर र बायोएनटेकले वाचा गरेअनुसार आपूर्ति नगर्दा युरोपमा खोप अभियान प्रभावित2min read
निर्मल पुर्जाले भने : हिउँदमा केटु आरोहण असम्भव जस्तै थियो, स-साना सहयोगले हौसला मिल्यो3min read
जनमुक्ति सेनालाई प्रचण्डको बेवास्ता, ओलीको वाचा त्यसैले हामी उता लाग्यौँ : लीलबहादुर थापा5min read